Wararkii ugu dambeeyay dagaalka lagu jilbo murxay ee duleedka Dhuusamareeb | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay dagaalka lagu jilbo murxay ee duleedka Dhuusamareeb
Wararkii ugu dambeeyay dagaalka lagu jilbo murxay ee duleedka Dhuusamareeb
Kumaandooska Gorgor oo gacan ka helaya Ciidamada Militariga ee Qaybta 21aad iyo kuwa NISA ee Galmudug ayaa Khamiistii shalay weeraray dagaal-yahanada Ahlu Sunna ee ku sugan deegaanka Bohol, oo qiyaastii 20km dhinaca waqooyi kaga beegan Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug.
Ciidamada Huwanta ayaa laga hor istaagay inay la wareegaan gacan ku haynta deegaankaasi. Isku dayo dhowr jeer ah ayaynaan ugu suurtagelin inay foodda geliyaan deegaankaasi.
Dagaalka ayaa la sheegay inuu sii xoogeystay, markii gurmadyo ay soo gaareen Xoogaga Ahlu Sunna, taa oo keentay in dagaal-yahanadii Ahlu Sunna ee dhufeysyada ku jiray ay soo baneeyaan, isla-markaana ay halis geliyeen nolosha Saraakiishii amarada siineysay ciidamada jiidda hore ka dagaalamayay.
Ciidamadan ayaa Maqribmadii xalay lagu khasbay inay dib uga gurtaan deegaankaasi iyo wadooyinka soo galaba, iyagoona ku laabtay Magaalada Dhuusamareeb, oo markii horeba laga soo abaabulay.
Wararka saaka ka imaanaya deegaanka Bohol ayaa sheegaya in deegaankaasi lagu arkayo dagaal-yahanada Ahlu Sunna iyo maleeshiyaad deegaanka ah oo taabacsan, xaaladuna ay tahay mid degan.
Cabdi Faarax Warsame oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in duulaanka lagu soo qaaday Ahlu Sunna aanay u kala harin dadka deegaanka, oo xitaa haweenka deegaanka ay qayb ka ahaayeen dagaalka.
Cabdi Faarax oo la hadlay Dhacdo.com ayaa sababta dadka deegaanka ay ula safteen dagaal-yahanada Ahlu Sunna waxaa uu ku sheegay in ay Ahlu Sunna tahay middii deegaankooda difaaceysay muddo laba iyo toban sano ah.
Dadka deegaanka ayaa sidoo kale laga soo xigtay inay arkayn dhowr ka mida gaadiidka dagaalka oo laga qabsaday ciidamadii duulaanka ahaa.
Dagaalka ayaa sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba isugu jira oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay, inkastoo ay adag tahay in la xaqiijiyo inta uu khasaaruhu le’egyahay. Warar aan la xaqiijin ayaase sheegaya in dhimashadu sii caga-cageynayso shan iyo toban qof oo dhinacyadii dagaalamay ah, dhaawacuna uu soddon ka badan yahay.
Taliye Kuxigeenkii hore ee Hay’adda Nabad Sugidda & Sirdoonka Qaranka (NISA), Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo la hadlay BBC ayaa dagaalkaasi ku tilmaamay fashil ku yimid Maamulka Galmudug.
Cabdisalaan Yuusuf ayaa sheegay in awoodda lagala hortaggayo Ahlu Sunna, ay ahayd in lagala hortaggo mintidiinta Ururka Al Shabaab, bacdamaa ay khatar weyn ku yihiin amniga iyo noloshada bulshada reer Galmudug.
“Ahlu Sunna waxay aragtay fursad ay dareensan tahay inay ku soo rogaal celin karto. Waxayna fursadaasi ka dhalatay dagaalada qabaa’ilada ee deegaanka ku soo batay, Shabaabka oo caqabad ku noqday gobolka, waxaana fursadaasi abuuray Maamulka Galmudug. Waxay rabaan siyaasad ahaan in dib u qabsadaan mamaulkii horey looga saaray, oo ay buuxiyaan meelaha ay dabacsanaanta ka jirto.” Ayuu yiri Cabdisalaan Guuleed.
Xoogaga Ahlu Sunna ayaa bartamihii bishii September dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabay Gobolka Galgaduud, xilli Hoggaamiyaha Guud ee Ahlu Sunna Waljameeca, Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faaarax iyo Madaxii Xukuumadda Galmudug, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ay deegaanka Huurshe kaga qaybgaleen Siyaarada Sheekh Yuusuf Direed, iyagoona deegaankaasi kaga dhawaaqay dagaal ka dhan ah Khawaariijta.
Soo rogaalcelinta Ahlu Sunna ayaa imaanaysa, muddo sanad iyo bar ah oo madaxdeeda ay ka maqneyd Gobolada Dhexe.
Gaadiid dagaal oo Madaxda Ahlu Sunna ay ka heleen beelaha qaarkood iyo qaar ka mida ciidamadoodii horaan la qarameeyay, dibna ugu soo biiray ayaa la fahamsan yahay inay xoojisay cududda ciidan ee Ahlu Sunna.
Xeeldheere-yaasha ayaa qaba muddadii Ahlu Sunna ka maqneyd Gobolada Dhexe in habacsanaan dhanka amniga ah laga dareemay deegaanada Galmudug, Shabaabkuna ay muddadaasi kordhiyeen weerarada ay ka gaysanayaan deegaanadaasi, iyagoona muujiyay khatarta ay ku yihiin amniga Magaalada Dhuusamareeb. Xarunta Maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb iyo deegaanada hoostagga qaarkood waxaa ka dhacay tiro qaraxyo ah, marar kala duwana waxay Shabaabku madaafiic ku garaaceen Garoonka Diyaaradaha Ugaas Nuur ee Magaalada Dhuusamareeb.
Ahlu Sunna ayaa lagu ammaanaa inay tahay midda ummadda Soomaaliyeed bartay in lala dagaalami karo kooxaha argagixisada, ka dib dagaaladii ay kula gashay qaybo ka mida Gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug.
Shabaabka ayaa in muddo ahba ka caaganaa dhulkii ay maamuleysay Ahlu Sunna, sababo ku aaddan khibradda ay u leedahay la dagaalankooda iyo dhimbisha kulul, ee ay ku suntan-tahay.
Previous articleMareykanka oo digniin adag u jeediyay Dowladda Itoobiya
Next articleDagaal-yahanada Ahlu Sunna oo laba jiho ka kulaalaya Dhuusamareeb